Wakiilka haalland oo ka hadlay kooxaha xiiseynaya weraryahankooda.
Home Suuqa kala iibsiga Wakiilka haalland oo ka hadlay kooxaha xiiseynaya weraryahankooda.
Wakiilka xidiga Halland ayaa kahadlaya dareenka cajiibka ah ee isbuucaan, isagoo sheegay in 10 naadi oo adduunka ah ay ka fikirayaan saxiixiisa Agaasimaha isboortiga ee kooxda Borussia Dortmund Michael Zorc ayaa ku raacsan Mino Raiola mustaqbalka Erling Haaland.
Wakiilka Raiola ayaa ka hadlayey Haaland isbuucaan, isagoo ugu yeeray \_”mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka ee tobanka sano ee soo socota isagoo sheegay inay jiraan kaliya 10 naadi oo adduunka ah oo awoodi kara inay la soo wareegaan.
Zorc wuxuu ogyahay in Haaland uusan sii joogi doonin Dortmund – laakiin wuxuu u maleynayaa in Raiola uu rajo wanaagsan ka qabo sheegashadiisa.
Zorc wuxuu u sheegay suxufiyiinta: “Way cadahay in Erling Haaland uusan dooran karin kooxna kaliya markii uu joogay Dortmund.
Xitaa ma dooran karo 10 naadi oo macquul ah. Marka, ma jiro wax diidmo ah. Waxay ahayd bayaan caadi ah oo isagu Raiola ay tahay inuu siiyo waqti ka waqti.
“Waan ku faraxsanahay inaan halkaan kula joogno Erling iyo inuu dhaliyay goolalkii ugu dambeeyay isla markaana cadeeyay qiimahiisa anaga. Waxaan dhihi karaa oo keliya waan sii wadi doonnaa inaan la sii qorsheysanno isaga mana u maleynayo inuu ku qanacsan yahay halkan Dortmund.
Haaland waa ciyaaryahan Dortmund haatan, laakiin waa la arki doonaa inuu sii joogi doono xilli ciyaareed kale oo uu macalin u yahay Marco Rose.
Warbixinnada ka socda Jarmalka ayaa sheegaya in Dortmund ay aad ugu furan tahay inay u oggolaato Jadon Sancho inuu ka tago Haaland, laakiin dalab aad u weyn ayaa tijaabin kara go’aankooda.
Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona iyo Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha ugu sareeya ee lala xiriiriyay.
Arimaha dhaqaalaha ee kooxda reer Spain si fiican ayaa loo faafiyey, si kastaba ha noqotee, iyada oo kooxaha adduunka oo dhan ay tahay inay adkeeyaan suumanka sababtoo ah saameynta cudurka faafa ee coronavirus.
Waqtigaan la joogo, waxay umuuqataa in tartanka loogu jiro saxiixa Haaland uu yahay mid lagu wareejinayo xagaaga – lagana yaabo inuu dhaafo
Previous articleXidiga Real Madrid Borja Mayoral oo damacsan inuu si Rasmi ah uga mid noqdo Roma.
Next articleJoan Laporte oo ku dhawaaqay kooxdiisa mashruuca ee doorashada barcelona.